Hery Rajaonarimampianina : «Ny fokontany sy ny kaominina no hiaingan’ny fampandrosoana» -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : «Ny fokontany sy ny kaominina no hiaingan’ny fampandrosoana»
06/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy nihambahamba ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nanambara fa antoka na/syfototry ny fampandrosoana ny firenena ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Araka izany, voalaza fa mila fanentanana hatrany ny fampidiran-ketra eny anivon’ireo kaominina tsy an-kanavaka eto Madagasikara mba hananan’izy ireo fahaleovan-tena ara-bola.
“Tsy tokony hiankin-doha amina fanampiana avy amin’ny Fanjakana foibe hatrany ireo kaominina na ireo voalaza fa vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Raha toa ka miditra sy voaangona ara-dalana ny hetra isan-tokony izay tokony miditra eny anivon’ny kaominina, mino aho fa mahaleo tena ara-bola hampandehanana sy hampandrosoana ny eny ifotony izy ireo”, hoy hatrany ny Filohan’ny Repoblika.
Na izany aza, nahatsapa ny Filoha Hery rajaonarimampianina fa tsy mbola mitovy amin’ireo firenena afrikanina sasantsasany i Madagasikara, izay tokony hanomezana fahefana ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana amin’ny fitantanana ireny tetikasa sy fampiasam-bola goavana ireny. “Ankehitriny, mitodika amin’ny tena fampandrosoana isika. Ekena fa tsy ampy ny hoenti-manana saingy, tsy azo atao kosa ny manasaro-javatra. Havadika ny rasa, ahena ny teibola amin’ny fampandehanan-draharaha fa hampitoboina kosa ny fandaniana any amin’ny fananganana fotodrafitrasa fototra”, hoy ny Filoham-pirenena.
Notsindrian’ny Filohan’ny Repoblika ihany koa fa nanao ezaka goavana ny Fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny fandefasam-bola mivantana, izay efa matetika, amin’ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Anisan’izany tamin’ireo kaominina roa teto Madagasikara izay tsy afaka nandoa ny karaman’ny mpiasa teo anivony, sns.
Nambarany hatrany fa ny fisian’ny atrikasa iraisam-pirenena no fotoana hifampizarana traikefa eo amin’ny samy vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Na izany aza, hoy ny Filoha, mila miaraka mitady vahaolona ny rehetra, ny Fanjakana foibe sy ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana, mba hisorohana na/sy hialana amin’ireo singa tsy ahafaha-mampnadroso.